Madaxweyne Farmaajo oo shaqada ka joojiyay Raysal-wasaaraha | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Farmaajo oo shaqada ka joojiyay Raysal-wasaaraha
Muqdisho-(Berberanews)-Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayaa shaqada ka hakiyay Raysal-wasaare Khayre oo muddooyinkii u danbeeyay uu ka dhextaagnaa khilaaf siyaasadeed iyo mid awoodeed.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Villa Somalia, ayuu Madaxweynuhu shaqadii ka joojiyay Raysal-wasaare Rooble
Halkan ka akhriso qodobada Madaxweynuhu u cuskaday shaqo-joojinta Raysal-wasaaraha.
“Markuu arkay tallaabooyinka khilaafsan Dastuurka KMG ah ee uu qaaday Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble sida ku cad Qodobka 87aad, Xarfaha (b) iyo (c) iyo Qodobka 90aad, Xarfaha (b), (c) iyo (e);
Sidaas darteed, waxaa lagu dhiirrigelinayaa dhammaan hay’adaha ay khuseeyso hawlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan Jadwalka Doorashooyinka ee la faafiyay.”
Previous articleSomaliland: Sare-u-kaca tirada dadka u dhintay COVID-19
Next articleDowladda Djibouti oo dalkeeda ku xannibtay Fahad Yaasiin